Xukuumadda Somaliland, ayaa joojisay Dal-ku-galka la siin jiray Dadka ka imanaya Dalka Itoobiya – Radio Baidoa
Xukuumadda Somaliland, ayaa joojisay Dal-ku-galka la siin jiray Dadka ka imanaya Dalka Itoobiya
Xukuumadda Somaliland, ayaa joojisay Dal-ku-galka la siin jiray Dadka ka imanaya Dalka Itoobiya, ka dib markii ay Dowladda Itoobiya jimcihii si rasmi ah u shaacisay in Kiiskii ugu horreeyey ee Corona-virus Covid-19 laga helay Qof ajaanib ah oo magaalada Addis Ababa ee Dalka Itoobiya.
“Dalka Itoobiya, qofkii u horreeyay baa laga helay cudurka #COVID19, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadku. Dhammaan muwaadiniinta JSL ee ku sugan Itoobiya waxa la gudboon inay raacaan hannaanka iyo habka caafimaad ee loo dejiyay, dawladda Itoobiya na ay dadka farayso in la raaco” ayuu yiri Wakiil ku xigeenka Somaliland ee Itoobiya.
Waxaa uu intaa kusii daray hadalkiisa” Waxaannu safaarad ahaan, annagoo horeba feejignaan saa’id ah u muujinay, si ku-meel-gaadh ah u joojinnay bixinta dal-ku-galka (Fiisaha), dadka doonaya inay Jamhuuriyadda Somaliland tegaan ee ka imanayay Itoobiya. Wixii soo kordha, bulshada waannu la socodsiin doonnaa.”
Saraakiisha dalka Itoobiya waxay shaaca ka qaadeen qofkii ugu horreeyay ee lagu arko cudurka Corona.
Qofka laga helay caabuqa ayaa kasoo jeeda dalka Japan.
Cudurkan oo dhammaadka sannadkii 2019 ka bilaabmay Magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, ayaa si xawli ah ugu faafay Dalal badan oo Qaaradaha Dunida ku kala yaal,
madaxweynaha Galmudug oo kulan laqaatey saraakiisha Amniga Galmudug